Arsenal Oo Lagu Heysto Farriintii Taageeradda Falastiin Ee Mohamed Elneny – Garsoore Sports
Arsenal Oo Lagu…
Kooxda kubbada-cagta ee Arsenal ayaa cadaadis kala kulmaysa mid kamid ah shirkadaha maalgashiha ah oo ay heshiisyada kula jirto si ay talaabo uga qaadaan Mohamed Elneny kaddib markii ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Masar uu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray farriin uu ku taageerayo shacabka Falastiin.
Mohamed Elneny ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray “wadnahayga iyo nafteyda iyo taageeradeyda waa adinka Falastiin,” iyadoo dagaalada ay wali sii socdaan xilli rabshadaha ka jirta gobolka ay keentay in 136 ruux ay ku naf waayeen Qaza iyadoo 950 ruuxna dhaawac ay yihiin.
Maalgeliyayaashan oo lagu magacaabo Lavazza Group ayaa Arsenal la yeelanaya wadahadalo deg deg ah kaddib markii Elneny uu soo bandhigay taageerada uu u hayi dadka reer Falastiin.
Qoraalka ayaa kiciyay xanaaqa taageerayaasha Yuhuudda ee Arsenal maxaa yeelay waxaa ku jiray sawir uu ku qornaa ‘Nolosha Falastiin Ayaa Micno Leh’ oo lagu soo bandhigay muuqaalo ay ka buuxaan sawirro Falastiin u janjeera sida la sheegay.
Xiriir lala sameeyay sarkaal ka tirsan Lavazza Group ayaa wuxuu ku yiri: “Waxaan si deg deg ah ula xiriiri doonaa Arsenal si aan ugu sheegno inaan ka walaacsanahay arrimaha la xiriira farriinta noocaas ah.”
“Tusmada qoraalkani gabi ahaanba lama jaan qaadayo qiyamka shirkadeena. Kooxda Lavazza Group waxaa si buuxda uga go’an ka hortaga cunsuriyadda iyo nacaybka.”
Shirkadda ayaa ku riixday Arsenal inay bayaan kasoo saarto qoraalka Maxamed Elneny iyada oo kooxda u sheegtay in ‘Elneny uu xaq u leeyahay inuu muujiyo ra’yigiisa laakiin ay ka hadlayaan saameynta balaaran’.
Lavazza Group ayaa sidoo kale la xiriirtay shirkadda Adidas oo heshiis kula jira Gunners si ay ugala hadasho arrinkan inkastoo aysan ka jawaabin, halka ay sidoo kale FA-ga ka codsadeen in shaqada laga joojiyo Elneny.
Wakiil u hadlay Lavazza Group ayaa yiri “Waxaan ka xumahay in Arsenal aysan dooneynin inay si dhab ah wax uga qabato arintaan, waxaana ka rajeynayaa wax ka wanaagsan tan, ”